Folo Taonan’ny Finamànana Mahafinaritra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Desambra 2017 6:39 GMT
Mety tsaroan'izao tontolo izao angamba ny tamin'ny 10 novambra 2007 izay nanambaràn'ny mpanjaka tamin'ny filoha tamin'izany fotoana izany ny fitenenana hoe “Nahoana ianao no tsy mikombom-bava?“
Araka izany, nisoratra aho. Fotoana fohy tamin'io andro io ihany, naharay valiny avy amin'i Juan Arellano aho, mpamoaka lahatsoratra tamin'izany fotoana izany tao amin'ny Lingua Espaniola, izay nanontany ahy raha toa manana fotoana malalaka hanaovana asa an-tsitrapo aho, raha toa aho manana fidirana tsy tapaka amin'ny aterineto ary raha toa aho manana hevitra mikasika ireo blaogy. Ny valin'ireo fanontaniana roa voalohany dia eny, mikasika izay ho valin'ny fahatelo, maika be aho ny hianatra. Araka izany, nekeny ny hanome ahy ny lahatsoratra voalohany ho adikako, izay naveriko taminy ny ampitso. Ary teo noho eo ihany dia navoakany.
Roa taona taty aoriana, nanasa ahy hanoratra ho toy ny mpanoratra ho an'ny Global Voices, ny toniandahatsotra any amin'ny faritra, Eddie Avila. Tonga dia nanaiky aho, niaraka tamin'ireo fisalasalana ihany anefa, ary dia izay no lohatsoratro voalohany amin'ny maha-mpamoaka lahatsoratra ahy.
Eto amin'ny Global Voices, mpandikateny an-tsitrapo aho, mpanoratra an-tsitrapo ary mbola tazoniko ireo andraikitro roa ireo. Ankehitriny, mpamoaka lahatsoratra amin'ny Lingua espaniola aho. Ankoatra ireo, tonian-dahatsoratra ao amin'ny faritra aho nandritra ny volana maromaro tamin'ny taona 2014 sady nanampy ihany koa ny tetikasa Amazonia ho an'ny Rising Voices, izay nanome tombony ho ahy koa mba hiasa miaraka amin'i Eddie Avila indray.